Uyashiya kuZalo uMaNgcobo wodumo
UYASHIYA emdlalweni Uzalo uThandeka Dawn-King olingisa indawo kaMaNgcobo kulo mdlalo. UThandeka kuvela ukuthi ushiya kulo mdlalo ngenxa yokuthi uzoba yingxenye yomdlalo omusha oqoshwa eGoli ISITHOMBE: TWITTER
NGEMUVA kweminyaka emihlanu elingisa indawo kaMaNgcobo emdlalweni Uzalo, uThandeka Dawn-King uyashiya kulo mdlalo.
UThandeka ungomunye wabalingisi abaqala kulo mdlalo ngesikhathi ufika kwiSABC1.
Imithombo emibili engaphakathi kulo mdlalo ipotshozele Isolezwe ukuthi izindaba zokushiya kukaThandeka kulo mdlalo sezifikile nakubaphathi bawo.
Umthombo wokuqala okhulume neSolezwe uveze ukuthi, uThandeka ushiya lo mdlalo nje uya emdlalweni omusha oqoshwa eGoli, nazoba yingxenye yawo.
“Uthole amadlelo aluhlaza eGoli, kukhona umdlalo omusha oqoshwayo khona. Okwamanje akukacaci ukuthi uzophuma kanjani njengoba izindaba zokushiya kwakhe zifike kule mpelasonto kwabaningi. Ababhali balo mdlalo ima bezohlala phansi bacabange ukuthi bazomkhipha kanjani ngenxa yokuthi kulo nyaka Uzalo belungakabuyeli ekuqopheni ngenxa yokuthi bekusavaliwe kuyoze kuqalwe ngomhlaka 18 kule nyanga,“ kuchaza umthombo.
Omunye umthombo uveze ukuthi kumangaze abasebenzi abaningi kulo mdlalo ukushiya kukaThandeka.
“Kwenzeke into ebingalindelekile ukuvela kwezindaba zokuthi uThandeka uyashiya. Esesikuzwile nje ukuthi okusanganisa ababhali balo mdlalo kakhulu ukuthi kushiya umlingisi omkhulu kangaka njengoThandeka nje, maduzane kuzohamba uBaby Cele kuwo, nokuzophoqa ukuthi bambuyise yize bese bezitshele ukuthi bayamchitha,“ kuchaza umthombo.
UNomfundo Zondi okhulumela inkampani eqopha lo mdlalo iStained Glass, uthe ngeke baze baphawule lutho ngalolu daba okwamanje.
“Akukho zimpendulo esizozinika abezindaba ngalolu daba,“ kusho uNomfundo.
Isolezwe ngoMgqibelo lisanda kubika ukuthi abalingisi balo mdlalo babe noKhisimusi noNcibijane omuncu njengoba bengawuholelanga uNovemba noDisemba.
Kuvela ukuthi okuholele ekutheni bangayitholi imiholo yabo, ukuthi bebemile bengaqophi.
Imfundo kayikhulelwa: Zama Masondo